Umbuzo othi kungani umnsalo usezandleni, ngizibuze Wabasaqalayo hhayi kuphela kodwa balimi abangakaze babhekane nakho. Kungaba khona eziningana.
Okokuqala, umcibisholo ngeke ngempela (futhi ngokushesha), uma itshalwe ama e ayizange sekuqala ukufudumala ngempela umhlaba. Kuyingozi iqiniso lokuthi ngokuvamile ungakwazi anyukele, kanti ukuvuna ngeke. Okwesibili, umcibisholo kungenzeka uma uqhubeka izithombo abandayo kakhulu noma endlini efudumele kakhulu. Ngokuvamile, izinga lokushisa kanye nomswakama ngamunye ekilasini. Hlukanisa ukushisa, amakhaza, futhi isitoreji ukushisa-abandayo. Ngokuphazima kweso lapho izinga lokushisa kanye nomswakama - indlela ngqo imicibisholo. Okwesithathu, asikwazi itshalwe ama sikhulu kakhulu. Abanye bakholelwa ukuthi ngenxa yalokhu, ama balungile, kodwa okuhlangenwe nakho kuveza okuhlukile. Ngakho umbuzo wokuthi kungani umnsalo usezandleni, akukho impendulo eyodwa. Lona kungaba isitoreji engalungile noma Ukukhetha engalungile of izinto zokusetshenziswa.
Uma ngabe uthole isizathu sokuthi kungani Uthingo imicibisholo, ungakwazi akulungise lapho wenza amaphutha ngokuzayo kuphela. Futhi manje ingakusiza ngokwabo, ngahlukana zonke imicibisholo (mhlawumbe eduze phansi). Ungagijimeli abaphonse! Ungakwazi ucime kubo. It kuvela isidlo esihlwabusayo kakhulu, ukunambitha efana amakhowe. Kill izinyoni ezimbili: bese ugcine izitshalo, futhi umndeni dinner okumnandi bayojabula. Uma uthenge izithombo, cishe angazi mayelana izimo lapho u-anyanisi zigcinwa. Ngakho asikho bayazibuza ukuthi kungani umnsalo usezandleni, kulungele ke ngaphambi kokutshala.
Growing anyanisi kusuka imbewu - akulula. Ukuze kuzuzwe umphumela omuhle kubalulekile ukuhambisana nobuchwepheshe ezithile. Tshala yaleli kwezitshalo ngasekupheleni April, ngo izinombolo 20-25. I imibhede ukwenza elilodwa ukujula nesigamu kuya ngamasentimitha amabili futhi ama kancane sicindezelwe ngazo phansi. Ngemva betshala amanzi ngamanzi afudumele futhi embozwe polyethylene ifilimu ozoqinisekisa ukuvela ekuqaleni. Njengoba masinyane njengoba you bheka amahlumela lokuqala olwakhiwa, ususe tape. Anyanisi hhayi yimikhuba enhlabathini, ngakho-ke kungenziwa itshalwe cishe noma kuphi. Ukuze isitoreji kangcono amasonto 2-3 ngaphambi kokuvuna stop yamanzi. Uma ukhetha ebangeni lelitsite, cabangela izimo zezulu we umdweshu ohlala kilo.
Akuwona wonke umuntu uyazi ukuthi umnsalo phezu esibayeni uhlukile phezu itheniphu. Inzuzo yayo - ithenda nemifino namanzi. Kodwa ikhanda lakhe mncane impela. Indlela ukutshala anyanisi e-green? Beka ogxile yakhe Seva, ngakho ngokushesha ngangokunokwenzeka ukuze uthole isivuno, futhi ulondoloze. Lapho ababebuthene okutshalwe entwasahlobo, le ama ngaphambi cwilisa amahora angaba amashumi amabili nane ngamanzi afudumele, omile zangaphambi ukusika phezulu. Kukhona futhi ezihlukahlukene zisetshenziswa, okufaneleyo ikakhulukazi. Ezinye izinhlobo zawo abe izimbali ezinhle, ukuze ukwazi ukusebenzisa abasebenzi njengezinkabi zabo imihlobiso zokuhlobisa. Ukutshala onion ku imifino unyaka wonke, ngisho ukhule efasiteleni. Anyanisi unezela hhayi kuphela ukunambitheka piquant izitsha, kodwa futhi unalo isinqandakuvunda esihle, okuyinto ebaluleke ikakhulukazi nenkathi ebandayo.